वैकल्पिक वर्तमान बनाम प्रत्यक्ष वर्तमान: मतभेद र समानता | नि: शुल्क हार्डवेयर
इसहाक | 28/09/2021 09:00 | शिक्षा, सामान्य
तपाईंले गर्नु पर्छ वैकल्पिक वर्तमान र प्रत्यक्ष वर्तमान बीच भिन्नता। दुबै धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, र दुबै औद्योगिक र प्रयोग गरीन्छ घरेलु स्तर मा उपकरणहरुको एक भीड शक्ति गर्न। औद्योगिक मेसिनरी बाट, घरेलु उपकरणहरु को लागी, मोबाइल उपकरणहरु को माध्यम बाट, र अन्य इलेक्ट्रोनिक तत्वहरू.
यसको अलावा, तपाइँ पनि समानताहरु सिक्न सक्नुहुन्छ, किनकि उनीहरु बीच अवस्थित छन् डीसी र एसी, साथ साथै एक रोमाञ्चक कहानी र दुई धेरै प्रसिद्ध आविष्कारकहरु को बीच संघर्ष कि उनीहरुलाई बढावा दिन को लागी केहि अत्याचार को लागी नेतृत्व गरीयो ...
1 धारा के हो?
2 प्रत्यक्ष वर्तमान के हो?
2.1 आवेदन र रूपान्तरण
3 AC के हो?
4 डीसी बनाम एसी: लाभ र हानि
4.1 एसी / डीसी रूपान्तरण
धारा के हो?
una वर्तमान यो केहि को एक प्रवाह हो, यो पानी को एक धारा हो, वा एक विद्युत धारा। विद्युतीय प्रवाह को मामला मा, के साँच्चै हुन्छ कि त्यहाँ एक कंडक्टर को भित्री को माध्यम बाट चलिरहेको इलेक्ट्रोन को एक प्रवाह छ, भले ही यो देखिएको छैन।
यो विद्युत् प्रवाह यो मौलिक रूपमा दुई प्रकार को हुन सक्छ ...
प्रत्यक्ष वर्तमान के हो?
यदि तपाइँ पहिले नै थाहा पाउनुहुनेछ यदि तपाइँ यो ब्लग बारम्बार पढ्नुहुन्छ, DC, पनि सीसी (वा अंग्रेजी मा डीसी) को रूप मा संक्षिप्त, एक दिशा संग एक वर्तमान हो। त्यो हो, इलेक्ट्रोन को प्रवाह बिभिन्न क्षमता र बिजुली चार्ज को दुई बिन्दुहरु को बीच एक कंडक्टर को माध्यम बाट एक विशिष्ट दिशा मा हुनेछ। यदि हामी एक ग्राफ मा वर्तमान ग्राफ गर्न को लागी, यो एक निरन्तर, लगातार लाइन को रूप मा प्रकट हुनेछ।
यो प्रत्यक्ष वर्तमान १1800०० मा पहिलो पटक को लागी उत्पादन गरिएको थियो, इटालियन भौतिक विज्ञानी एलेसान्ड्रो भोल्टा द्वारा बनाईएको ब्याट्री को लागी धन्यवाद। यो वर्तमान प्रवाह को प्रकृति राम्रो संग समय मा बुझिएको थिएन, तर यो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो। १1870० र प्रारम्भिक १1880० को दशकमा, यो बिजुली बिजुली संयन्त्रहरुमा उत्पादन गर्न थाल्यो, बत्ती को आविष्कार पछि कम्पनीहरु र घरहरु को प्रकाश को लागी। थोमस एल्भा एडिसन.
वर्तमान को यस प्रकार को रक्षा गर्न, एडिसन वास्तव मा dantesque शो बनाउन को लागी, को लागी कोशिश गरीरहेको थियो निकोला टेस्ला को बदनाम, उनको वर्तमान अधिक खतरनाक भएको दाबी गर्दै। यो गर्न को लागी, एडिसन सार्वजनिक प्रदर्शनहरु बिभिन्न जनावरहरु लाई इलेक्ट्रोकुटि make्ग गर्न आए। १ 1903 ०३ को प्रारम्भमा, एक हजार मानिसहरूले देखे कि कसरी उनी electro,6600०० भोल्टको विद्युत्ले हात्तीलाई बिजुली काटेर मारे। जे होस्, हात्ती पहिले साइनाइड विषाक्त गाजर खुवाइएको थियो यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि यो मरे। यी सबै घटनाहरु लाई भनिन्थ्यो धाराहरु को युद्ध.
आवेदन र रूपान्तरण
यो प्रत्यक्ष वर्तमान बिस्तारै बिस्तार वर्तमान द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको थियो, जो यसको फाइदाहरु थियो, हामी देख्नेछौं। जे होस्, यो वर्तमान मा व्यापक रूप मा यस्तो audiovisual उपकरण, कम्प्यूटर, आदि को रूप मा इलेक्ट्रोनिक घटक, को संचालन को लागी प्रयोग गरीन्छ। ती सबै को लागी विद्युतीय सञ्जाल बाट काम गर्न को लागी कि वैकल्पिक हो, रेक्टिफायर उपकरणहरु परिवर्तन को लागी प्रयोग गरीन्छ, जस्तै एडेप्टर वा बिजुली आपूर्ति।
यद्यपि वैकल्पिक धारा मा ध्रुवीयता यो यति मौलिक छैन, प्रत्यक्ष वर्तमान मा यो केहि साँच्चै महत्वपूर्ण छ, र यो सम्मानित हुनु पर्छ यदि सर्किट ठीक ढंगले काम गर्न को लागी हो र बिगार्ने छैन। डीसी मा polarity परिवर्तन केहि अवस्थामा अपरिवर्तनीय क्षति को मतलब हुन सक्छ, त्यसैले तपाइँ यस संग सावधान रहनु पर्छ।
यही कारणले गर्दा यो टर्मिनल वा केबलहरु को लागी उनिहरु को सम्बन्धित पोल संग चिह्नित गर्न को लागी सामान्य छ, वा रंगहरू यसलाई छुट्याउन। सामान्यतया, रातो सकारात्मक ध्रुव (+) को लागी प्रयोग गरिन्छ, र नकारात्मक (-) को लागी कालो। केहि अधिक जटिल डीसी सर्किटहरु अतिरिक्त रंगहरु लाई थप्न सक्छन्।
AC के हो?
La वैकल्पिक वर्तमान, सीए (वा अंग्रेजी मा एसी) को रूप मा संक्षिप्त, विद्युत प्रवाह को एक प्रकार हो जसको परिमाण र दिशा चक्रवात, अवधि मा भिन्न हुन्छ। त्यो भन्न को लागी, सीसी को विपरीत, जो एक ग्राफ मा प्रतिनिधित्व एक सीधी रेखा थियो, वैकल्पिक एक को मामला मा यो एक sinusoidal दोलन को रूप मा प्रतिनिधित्व गरीन्छ। प्रति सेकेन्ड पूरा चक्र को संख्या चक्र को आवृत्ति मा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, यूरोप मा हामी 50 हर्ट्ज, वा प्रति सेकेन्ड 50 पटक छ, जबकि अमेरिका मा यो 60 हर्ट्ज मा काम गर्दछ।
यो वर्तमान १1832३२ मा देखा पर्नेछ, जब Pixii सिर्जना हुनेछ पहिलो अल्टरनेटर, एक डायनामोइलेक्ट्रिक जनरेटर, फराडे सिद्धान्तहरुमा आधारित। पछि, Pixii पनी एक सीधा वर्तमान उत्पादन गर्न को लागी एक स्विच जोड्नेछ, जुन अधिक प्राचीन समय मा प्रयोग गरीएको थियो। १1855५५ मा यो निर्धारित गरिएको थियो कि एसी डीसी भन्दा राम्रो थियो र यसलाई प्रतिस्थापन गर्न समाप्त भयो।
वैकल्पिक वर्तमान प्रविधि थियो युरोप मा विकसित, १1850५० को दशक मा Guillaume Duchenne को काम को लागी धन्यवाद। १1876 मा, एक रूसी ईन्जिनियरले एडिसन जस्तै एक प्रकाश प्रणाली को आविष्कार गर्नेछन्, तर उच्च भोल्टेज एसी संग। बुडापेस्ट मा Ganz वर्क्स कम्पनी लाई यो सिद्धान्त मा आधारित प्रकाश उपकरण निर्माण गर्न को लागी शुरू गरीनेछ, यस धारा मा आधारित अन्य उपकरणहरु को अतिरिक्त।
सर्बियाई ईन्जिनियर र आविष्कारक निकोला टेस्ला, एडिसन को निरन्तरता को बिरूद्ध यो वर्तमान को सबैभन्दा ठूलो रक्षकहरु मध्ये एक थियो। उहाँले डिजाइन र पहिलो वैकल्पिक वर्तमान प्रेरण मोटर, जो रोटेशनल मेकानिक्स मा विद्युत ऊर्जा रूपान्तरण गर्न सक्छ निर्माण। यसको अतिरिक्त, यो प्रतिभा लाई लाइन मा परिवर्तन नगरी बिजुली वितरण प्रणाली लाई सही गर्न मा मद्दत गर्दछ।
यसको अतिरिक्त, टेस्लाले युरोपेली ईन्जिनियरहरु द्वारा विकसित एक उपकरण को नाम ले अनुसन्धान गरे ट्रान्सफार्मर। यसको लागी धन्यवाद, यो एक कम भोल्टेज मा रूपान्तरित हुन सक्छ, र यस प्रकार यो घरहरु को लागी सुरक्षित बनाउन को लागी, यो मात्रा मा यो उत्पादन भएको थियो मा आउन को लागी आवश्यकता बिना, सबैभन्दा ठूलो डर को एक यसको खतरनाकता थियो। यी अनुसन्धानहरु कल को शुरुवात हुनेछन् धाराहरु को युद्ध.
निकोला टेस्ला CA संग सम्बन्धित सबै पेटेन्ट कम्पनी लाई तोकिएको थियो वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक, पूँजी उठाउन र यस प्रवृत्ति मा आधारित परियोजनाहरु संग जारी राख्न। यस पछि, CA को पहिलो interurban प्रसारण धेरै समय लाग्दैन, १1891 XNUMX १ मा भइरहेको थियो। त्यो टेलुराइड (कोलोराडो) मा हुनेछ, केहि महिना पछि यूरोप मा, Lauffen देखि Frankfurt (जर्मनी) सम्म।
जब एसी विजयी भयो र संसारभरि फैलियो, थोमस एडिसनले प्रत्यक्ष वर्तमान को लागी वकालत जारी राखे, केहि उसलाई कम्पनी मा उनको स्थिति खर्च हुनेछ। एडिसन इलेक्ट्रिक (अब जनरल इलेक्ट्रिक भनिन्छ), जुन उनी आफैंले स्थापना गरेका थिए ...
वैकल्पिक वर्तमान प्रयोग गरिन्छ उद्योग र घर को लागी, संसारको सबै भागहरुमा बिजुली ल्याउन बिजुली लाइनहरु को माध्यम बाट यात्रा गर्ने एक हो। यो घरेलू उपकरण, मोटर्स, औद्योगिक मेसिनरी, प्रशीतन प्रणाली, र धेरै चलाउन सक्छ।
जस्तै मैले पहिले उल्लेख गरेको छु, जब तपाइँ एक जडान गर्नुहोस् प्लग, तपाइँ कहिल्यै सावधान हुनुहुन्न कि तपाइँ यसलाई कसरी राख्नुहुन्छ किनकि यो कुनै पनि अवस्थामा काम गर्दछ। यो वैकल्पिक वर्तमान को तरंग को कारण हो, यो वैकल्पिक हुनेछ। जे होस्, परम्परागत प्रतिष्ठानहरु को लागी, त्यहाँ तारहरु, आदि भेद गर्न को लागी तरिकाहरु छन्। सामान्यतया तपाइँ एक पहेंलो / हरियो तार हो कि जमीन हो, एक नीलो वा सेतो तार तटस्थ हुनेछ, र खैरो वा कालो चरण हुनेछ।
डीसी बनाम एसी: लाभ र हानि
दुबै धाराहरु अझै पनी व्यापक रूप मा आज प्रयोग गरीरहेछन्, जसरी उनीहरु छन् यसको फाइदा र बेफाइदाहरू। उदाहरण को लागी:
वैकल्पिक वर्तमान परिवर्तन गर्न को लागी धेरै सजिलो छ, केहि जुन प्रत्यक्ष वर्तमान संग हुदैन।
भोल्टेज परिवर्तन गर्न को लागी, वर्तमान मा वैकल्पिक रूप मा तपाइँ केवल एक ट्रांसफार्मर को उपयोग गर्न को लागी छ, जबकि प्रत्यक्ष वर्तमान मा तपाइँ श्रृंखला मा डायनामो वा जेनरेटर जडान गर्न को लागी आवश्यक छ, जुन व्यावहारिक छैन।
वैकल्पिक वर्तमान कम वर्तमान तीव्रता संग लामो दूरी मा वितरित गर्न सकिन्छ, Joule प्रभाव र एडी धारा वा हिस्टेरेसिस को रूप मा अन्य प्रभावहरु को कारण गर्मी को रूप मा धेरै कम हार। जबकि डीसी को भारी घाटा छ, र यो माग बिन्दुहरु को नजिक बिजुली संयंत्रहरु को एक ठूलो संख्या मा हुन आवश्यक छ।
एसी / डीसी रूपान्तरण
(बिजुली आपूर्ति हेर्नुहोस्)
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » शिक्षा » वैकल्पिक वर्तमान बनाम प्रत्यक्ष वर्तमान: मतभेद र समानताहरु